Ungayisebenzisa kanjani i-WhatsApp enezinombolo ezimbili - Izeluleko - I-T mov RELAY
Accueil » AMACEBISO Ungayisebenzisa kanjani i-WhatsApp enezinombolo ezimbili - Izeluleko
Ungayisebenzisa kanjani i-WhatsApp enezinombolo ezimbili - Izeluleko
TELES RELAY 15 November 2019
Ingabe unayo ifoni eyizingxenye ezimbili ye-SIM esebenzisa i-Android futhi uzibuza ukuthi kungenzeka yini ukuthi isebenze i-akhawunti ye-WhatsApp enezinombolo ezimbili kudivayisi efanayo? Uzoba nentshisekelo yokwazi ukuthi lokhu kungenzeka. Sikuchazela ukuthi ungaqhubeka kanjani.
Ngokusho kwesikhungo Sosizo seWhatsApp, "i-akhawunti yakho ye-WhatsApp ingaqinisekiswa kuphela ngenombolo kudivayisi eyodwa. Uma une-dual-SIM (Dual SIM) ifoni, sicela wazi ukuthi kufanele ukhethe inombolo eyodwa ukuhlola i-WhatsApp. Azikho izindlela zokuthola i-akhawunti ye-WhatsApp ezinombolweni ezimbili. "
Eqinisweni, lokhu akulona iqiniso ngokuphelele. Uma ufuna ukwazi ukuthi kanjani Sebenzisa i-WhatsApp enezinombolo ezimbiliNazi izindlela ezahlukahlukene zokufeza lokhu.
Sebenzisa Isikhala Esilinganayo
Isikhala Esifanayo uhlelo lokusebenza olutholakala ku- -Google Play evumela ukuthi wena wenze ukuphinda kabili izinhlelo. Endabeni ye-WhatsApp, ungayilinganisa bese wenza i-akhawunti yesibili ngenombolo yakho yesibili yocingo. Ngakho-ke ungasebenzisa womabili ama-akhawunti ngasikhathi sinye.
Dala ama-akhawunti amabili abasebenzisi kwifoni yakho
Ukuvuselelwa kwe-Android 5.0 Lollipop kwenze ukuthuthuka okuthakazelisa kakhulu kwizinguqulo ze-Android: amandla okwenza amaphrofayili ahlukile womsebenzisi ku-ukuphela efanayo, njengakukhompyutha. Ngalesi sici, "umsebenzisi" ngamunye angaba ne-akhawunti yakhe ku-WhatsApp (noma olunye uhlelo lokusebenza).
Ukusizakala ngale ndlela, engeza iphrofayili yomsebenzisi entsha ngokufinyelela izilungiselelo kusuka ocingweni lwakho nangokungena Abasebenzisi nama-akhawunti > abasebenzisi. Bese ucindezela Engeza umsebenzisi > Ok. Kungenzeka futhi ukuthi ushintshe ngokushesha abasebenzisi kusuka esikhungweni sezaziso.
Lapho umsebenzisi wesibili esedalile, gcina inombolo ye-SIM khadi yesibili ku-WhatsApp. Ungasebenzisa i-akhawunti yesibili emsamo ngokushintsha nje umsebenzisi ocingweni lwakho.
Sebenzisa ifolda evikelekile (Izingcingo ze-Samsung)
Noma ingenzelwanga le njongo, uhlelo lokusebenza lokuphepha Ifolda evikelekile (eyake yaziwa nge-My Knox) ​​kusuka kwa-Samsung ikuvumela ukuthi uphinda kabili i-akhawunti yakho ye-WhatsApp noma ngabe awunayo ifoni eyabili-SIM. Ngempela, uhlelo luhlukanisa isikhala sefoni yakho njengokungathi ngamadivayisi amabili.
Ukuze usebenzise ifolda evikelekile, noma ifolda evikelekile ngesiNgisi, landa uhlelo lokusebenza ngokuya kulesi sixhumanisi (iselula yakho kumele ihambisane)
Ungawusebenzisa ngokuhlukile izilungiselelo > Isikhiya / Isikrini sokuphepha > Ifolda evikelekile > Démarrer,
Lapho isicelo sesilungiselelwe, khetha Ngeza izinhlelo zokusebenza ukuze ungeze i-WhatsApp. Ukugwema ukuthi udlule kule folda njalo lapho ufuna ukusebenzisa i-akhawunti yakho ye-WhatsApp yesibili, ungakha isinqamuleli. Ukuze wenze lokhu, vula Ifolda evikelekile bese ucindezela Hlela izinhlelo zokusebenza. Bese ukhetha i-WhatsApp bese ukhetha inketho yokuyengeza esikrinini sasekhaya. Kodwa-ke, uzokwazi ukwehlukanisa phakathi kwama-akhawunti amabili ngoba eyodwa evela kufolda Evikekile izokhombisa i-padlock encane kwisithonjana se-WhatsApp.
Sebenzisa Isikhala Sesibili (Izingcingo zeXiaomi)
Izingcingo zeXiaomi zikuvumela ukuthi wakhe isikhala sesibili kudivayisi yakho, ikunikeze ithuba lokuthi ube nezikhathi ezimbili ezahlukene. Ukuze wenze lokhu, iya ku izilungiselelo > Isikhala sesibili > Nika amandla Isikhala Sesibili. Ungabe usukhetha ukufaka i-WhatsApp kuzo zombili izikhala. Kuzovela isithonjana esisha esikrinini sasekhaya sefoni yakho ukukuvumela ukuthi ushintshele esikhaleni sesibili kanye okuphambene nalokho. Khumbula, noma kunjalo, ukufaka iSIM khadi yakho yesibili ukuthola ikhodi yokusebenzisa nge-SMS ukuvula i-akhawunti entsha ye-WhatsApp.
Lo mbhalo uvuselelwa njalo ngu Ochwepheshe ngaphansi kwe
isiqondiso de UJean-François Pillou, umsunguli we-CommentCaMarche
kanye nomqondisi wokudlulisela phambili ukuthuthukiswa kwedijithali kweqembu le-Figaro.
Masigqugquzele ukulwa ne-pedophilia nodlame olubhekiswe ezinganeni - ISANTE PLUS MAG
I-10 ifakazela ukuthi uhlala ubudlelwano obuqinile futhi obuyiqiniso - ISANTE PLUS MAG
Concert de Debordo Leekunfa: Samuel Eto'o défie Hamed Bakayoko – VIDEO
AMathiphu: AKUFUNI UHLELO LOKUXHUMA 36 UKUZE UKWENZELE ISITOLO
I-Fitbit Versa 2 smartwatch ibuyela emananini ayo aBlack Friday
Izinga likaRachel Legrain Trapani ku-l
ABANTU & LIFESTYLE8,752